स्वास्थ्य – Online Saptarangi
बीबीसी । अब कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास लगभग सकिने संकेत मिलेको छ । यो सन्देश बीबीसीले ब्रेकिङ्ग न्यूजको रुपमा प्रशारण गरिरहेको छ । पहिलो सफल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बिरुद्धको खोपले ९० प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गरेको निश्कर्षसँगै अब कोरोनाको त्रास समाप्त हुने संकेत देखिएको सन्देश अहिले बीबीसी मार्फत संसारभरी फैलिएको हो । यो प्रारम्भिक विश्लेषण […]
अति संक्रामक को’रोनाभाइरस सतहमा कति धेरै समयसम्म रहनसक्छ भन्ने विषयमा भर्खरै हामीलाई थाहा हुन थालेको छ । त्यसैले हामीले हाम्रो घरको ढोकामा आउने हरेक पार्सल वा घरमा डेलिभरी हुने खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तुहरुलाई छुनुअघि सेनिटाइज गर्छौँ । चिसो वा फ्रिज गरिएको खाद्यान्नको प्याकमा कति लामो समयसम्म कोभिड–१९ भाइरस बाँच्नसक्छ भन्नेबारे पनि भर्खरै जानकारी आउँदैछ । भर्खरै […]
October 20, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on नरिवल पानीका फाइदाः तौल घटाउनेदेखि डिप्रेसन हटाउनेसम्म
नरिवलको पानीमा स्वास्थ्यका निकै फाइदाजनक मानिन्छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका लागि तथा गर्भवती महिलाका लागि पनि नरिवलको पानी स्वास्थ्यवर्दक मानिन्छ । गर्मीयाममा नरिवलको पानीको माग निकै हुन्छ । बिहानै नरिवल पानी पिउँदा दिनभर ऊर्जावान् भइरहन सकिन्छ । यसले शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिँदैन । नरिवल पानी पिउनुका फाइदा १. नरिवलको पानी प्रशोधित फलफुलको जुसको सट्टामा […]
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोभिड–१९ को पहिचान गर्ने एउटा नयाँ उपकरणले गरिब तथा साधारण आय भएका देशमा सं’क्रमण पत्ता लगाउने क्षमतामा निकै वृद्धि हुने बताएको छ । संगठनले यो नयाँ परीक्षण उपकरणको कुरा यस्तो समय गरेको छ जब संसारभरी कोरोना भाइरसका कारण मारिएकाको संख्या १० लाख पार भइसकेको छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** […]
काठमाडौँ । महिलाहरु सुन्दर देखिन बजारमा पाइने विभिन्न कस्मेटिक सामानको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस मध्ये लिपिस्टिक पनि एक हो। महिलाहरुले आफूलाई राम्रो देखाउन विभिन्न रंगका लिपिस्टिकहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर आफूले सोचे जस्तो लिपिस्टिकको रंग ओठमा फरक देखिन्छ। जसका कारण कहिलेकाहीँ मनमा खिन्न लाग्छ। जसरी हामी अनुहारको स्याहार गछौं, त्यसरी नै ओठको पनि स्याहार गर्न […]
काठमाडौ । हाम्रो शरीरको विभिन्न स्थानमा दाग तथा कोठीहरु हुन्छन् । के ति कोठीहरुले कुनै शुभ वा अशुभ फल प्रदान गर्दछ ? यस सम्बन्धमा मसुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएको कोठी वा चिन्हका आधारमा व्यक्तिको भाग्य र भविष्य विश्लेषण गरिएको छ । शरीरमा हुने कोठीको आधारमा शारीरिक, आर्थिक तथा नैतिक चरित्रको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अनुहारमा […]
काठमाडौँ । भान्सामै हुने कतिपय औषधिहरुले तपाईंको छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। भान्सामा पाइने विभिन्न चीजहरुको प्रयोगबाट अनुहारमा भएको दागदब्बा र फोहोर हटाउन सकिन्छ। जान्नुहोस् यी ३ उपायः १) मह र टमाटरको प्याक मह र टमाटरले अनुहारमा आउने चाउरी र बुढोपन हटाउन मद्दत गर्छ । यसको प्याक बनाउनका लागि आधा कप टमाटरको लेदोमा १ चिया चम्चा […]
October 16, 2020 October 16, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on अब फार्मेसी मा अर्को हप्ता बाट कोरोना को औ षधि पाइने !
एजेन्सी – रसियाले कोरोना भाइरस विरू`द्धका लागि भनेर विकास गरेको एन्टिभा`इरल औषधि फार्मेसीहरुलाई बिक्री गर्न स्वीकृत दिएको छ । रसियाले स्वीकृत दिएसँगै अर्को हप्ता बाट रसियाका सबै फार्मेसीमा पाइने बताइएको छ । कोरोना भाइरसको सबैभन्दा पहिलो खोप दर्ता गराएको रसियाले ‘कोरोनाभिर’ एन्टिभाइरल औषधि बनाएको बताएको छ । कोरोना संक्र`मण बाट जटिल अवस्था भएकादेखि सामान्य अवस्थामा […]
October 7, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on पाककला : स्वादिलो र पोषिलो पनि
खानाबाट आनन्द लिन, स्वादको अनुभव गर्न र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पाककला महत्वपूर्ण छ । सामान्य लाग्छ, तर पाककला हाम्रो स्वास्थ्य र स्वादसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको विषय हो खाना पकाउनु आफैँमा एउटा कला हो । जसरी एउटा सुन्दर कलाकारको मेहनतले एउटा सुन्दर कलाकृतिको रचना हुन्छ, त्यसरी नै एउटा मेहनती गृहिणीले कलात्मक र मीठो खाना तयार पार्न […]